Fadeexaddo Kasoo Baxay Dawooyin Horre U Fashilmay Oo Maraykanka Loo Isticmaalay Coronavirus Iyo Dooddaha Ka Taagan - #1Araweelo News Network | #1Araweelo News Network
Commentator & Analysis / Health & Education / Warar | By admin
Fadeexaddo Kasoo Baxay Dawooyin Horre U Fashilmay Oo Maraykanka Loo Isticmaalay Coronavirus Iyo Dooddaha Ka Taagan
“Dwaddu waxay ku fashilantay dhowr tijaabo-nololeed oo dhab ah – oo aan ahayn oo keliya ka hor-tagga Jooniska, laakiin …”
Washington(ANN)-Saynisyahanada Maraykanka, khuburada Caafimaadka iyo Dhakhaatiirta ayaa isku khilaafsan dawo hore loogu isticmaalay Jooniska iyo cuddurka Ebola ee galbeedka Afrika caanka ku nooqtay (hepatitis and Ebola).
Dawadda Remdesivir, oo ah daawo lagu sheegay in hore loogu isticmaalay ka hor-tagga fayriska iyo in lagu daweeyo Jooniska iyo fayriska neefsashada ee caadiga ah, ayaa hadda u muuqda inuu ku biirayso kumanaanka daawooyin ee kale ee fashilmay, kadib markii la caddeeyay in aannay waxba ka tarayn cudduradaas. Daawada waxaa loo qoondeeyay arurinta dawooyinka, laakiin waxay iska ilaaween ayaa la leeyahay saynisyahannadii inay jaanta isla helaan.
Gilead Sciences, Inc. oo ah shirkad cilmi baadhis dhanka dawooyinka ah, isla markaana diirada saaraysa daahfurka, horrumarka, iyo ganacsiga dawooyinka hal-abuurka leh, ayaa noqotay shirkadda soo dhigtay dawadda ay sheegtay in cuddurka Coronavirus loo istcimaalo si lagu daweeyo bukaanada daawadda Remdesivir, oo lagu sameeyay horrumar.
Maalintii Jimcaha ee 1 May 2020, ku dhawaaqday Hay’adda Maraykanka u qaabilsan Maamulka Cuntada iyo Dawooyinka ee loo soo gaabiyo (FDA), ayaa shaacisay in shirkadda Gilead Sciences, Inc, loo siiyay ogolaanshaha Isticmaalka deg-deg ah, (Emergency Use Authorization. EUA), taas oo qayb ka ah baadhitaanka fayriska si looga daweeyo dadka xannuunka COVID-19.
Wxayna sheegtay in ogolaanshaha Isticmaalka deg-deg ah, (Emergency Use Authorization), fududeyn doono adeegsiga ballaadhan ee kabidda ah si loogu daweeyo bukaannada Cusbitaalada ku jira ee qaba cudurka COVID-19, taasoo u saamaxeysa marin u helka astaamaha cuddurka ee Cusbitaalda kale ee dalka oo dhan.
Qoondeynta sahayda hadda jirta ee xadidan ayaa la sameyn doonaa, iyadoo lagu saleynayo mabaadi’da hagida oo ujeeddadoodu tahay kor u qaadista helitaanka dawada bukaannada ku habboon ee u baahan daweynta deg-degga ah, iyadoo jihaynta iyo wadashaqeynta dowladda lala yeelan doono, ayay tidhi, Hay’adda Maraykanka u qaabilsan Maamulka Cuntada iyo Dawooyinka ee loo soo gaabiyo (FDA).
Arrintan, ayaa soo baxday, kadib Markii Madaxweyne Trump Jimcihii kula kulmay Xafiiska Oval Office oo ah xafiiska shaqada ee Madaxwaynaha Mareykanka, oo ku yaal West Wing ee Aqalka Cad, Washington, D.C .iyadoo kulan gaar ah ay ku wada yeesheen Madaxweyne ku xigeenka Pence; Daniel Mr. O’Day oo ah, Gilead Sciences C.E.O .; iyo Stephen Hahn, oo ah gudoomiyaha. Hay’adda F.D.A. ee Cuntada iyo Daawooyinka waa madaxa Maamulka Cuntada iyo Dawooyinka (FDA).
Markiiba waxa soo baxay in lagu eedeeyay in aannay arrintu ahayn mid sax ah, iyadoo ay jiraan shirkaddo waaweyn iyo khuburo kale oo ku mashquulsan sidii loo heli lahaa dawooyin iyo tallaal ka hor-tag ah oo lagaga hor-taggo xanuunka sida weyn aduunka u gil-gilay ee Coronavirus.
Sidoo kale, waxa su’aalo iyo doodo ka taagan yihiin dawadda Remdesivir, taas oo sharci ahaan muran dhalisay in iyadoo aan oggolaansho sharci ah lagu bixin in dadka lagu tijaabiyo.
Dr. Aaron Kesselheim, oo ah professor cilmiga caafimaadka ka dhiga Jaamacadda Harvard University oo barta qiimaynta dawooyinka. wuxuu yidhi, Haddii Shirkadda Gilead Sciences dib u helo abaalmarintii oo dhan, wuxuu raaciyay, “taasi uma muuqanayso wax cadaalad ah.”
Shirkadda Gilead Sciences, oo leh warshaddii dawada ka dambaysay qiimayntii tijaabada ahayd ee COVID-19, waxay ku kharash garaysay ololaynta Congress-ka iyo maamulka rubuc-qarnigii ugu horreeyay 2020 , sidii ay waligii ahaan jireen, sida ku cad feylasha federaalka ee ay ku shaaciyeen warbixinaha warbaahinta Maraykanka qaarkood ee indhaha ku hayay arrimahan.
Warbixinahaa, ayaa qaarkood tilmaamaya in Shirkadda dawooyinka ay $ 2.45 milyan ku bixisay ololeyn saddexdii bilood ee ugu horreeyay sannadka, 32% ayaa kordhay $ 1.86 milyan ee ay qaadatay rubucii ugu horreeyay ee 2019, iyadoo boqolaal shirkadood oo kuwa dawooyinka sameeya iyo khuburo dhanka Sayniska ah ku jiraan baadhitaano iyo dedaalo la doonayo in xal loogu helo cuddurka Coronavirus ee COVID-19, kaas oo marka laga yimaado dunida kale si weyn Maraykanka ugu haya dhiraabaaxooyin jaah-wareer iyo aragagax dhaliyay, kadib markii ay faafitaankiisa iyo dhimshada uu sababay kor usii kacday marba marka ka danbaysa.
Dr. Mark Denison oo ka tirsan Jaamacadda Vanderbilt University, wuxuu ka mid yahay cilmi baadhayaal fara badan oo ogaaday suurtagalnimada sicir-bararka. Wuxuu bilaabay barashada cilmiga Coronavirus rubuc qarni ka hor, wakhti ay saynisyahannadu danaynayeen – kuwa ku dhaca dadka ayaa sababay hargab, ayuu xusay, saynisyahannaduna waxay uun rabeen inay ogaadaan sida ay u shaqeeyaan.
Waxaan danaynaynay aragtida Bayolojiga, ”Dr. Denison ayaa xasuustay. “Qofna dan kama laha aragtida daaweynta.”, Isaga ama tiro kale oo saynisyahano ah oo danaynaya Coronavirus, ayaa saadaaliyay in mid cusub uu faafi doono daacuun dilay ku dhawaad rubuc milyan dad ah oo adduunka oo dhan ah. F.D.A. ayuu u orday si ay u ansixiyaan dib-u-dejinta iyada oo la raacayo qodobbada xaaladaha deg-degga ah, ka dib markii maxkamad Federaal ah ay soo bandhigtay horumar dhex-dhexaad ah oo bukaannada aadka u daran ee COVID-19.
Tijaabada, oo ay maal-galisay Machadka Qaranka ee Xasaasiyadda iyo Cudurada Faafa, yaa waxaa ka mid ahaa in ka badan 1,000 bukaan oo Cusbitaal la dhigey waxaana la ogaaday in kuwa qaata kabitaanka ay ka soo kabsadeen si ka dhakhso badan kuwa helay ‘placebo’: 11 maalmood, iyo 15 maalmood. Laakiin, wuxuu sheegay in aannay dawaddu waxaba kama tarin oo si weyn u yarayn heerka dhimashada.
Dr. Anthony S. Fauci, oo ah maamulaha Machadka Qaranka Maraykanka ee Xasaasiyadda iyo Cuddurada Faafa ee la kala qaado (National Institute of Allergy and Infectious Diseases), ayaa sheegay in natiijooyinka soo baxay caddayn aad muhiim u ah u yihiin fikirka, laakiin aannay aheyn “garaacid. Madaxweyne Trump ayaa jimcihii ku amaanay dawada inay tahay daawayn muhiim ah runtiina balanqaad leh. sida uu sheegay.
Remdesivir waxaa loo oggol yahay oo keliya bukaanka aadka u xanuunsanaya iyo keliya si ku meelgaadh ah; oggolaanshaha rasmiga ahi waa inuu yimaadaa goor dambe. Si kastaba ha noqotee, dhakhaatiirta qaarkood oo ka howl-gala qeybaha daryeelka deg-degga ah, waxay u qaateen daawo sidii hub muhiim ah oo cusub oo looga hor-ttago fayris dila bukaanka adduunka oo dhan.
Dr. Robert Finberg, oo ah gudoomiyaha waaxda caafimaadka ee Jaamacadda Massachusetts Medical School ayaa yidhi, Wax yar oo ku saabsan taariikhdii hore ee Remdesivir dib-u-habaynta, oo ay soosaartay Gilead Sciences, ayaa soo jeedisay rajada hadda la saaray.
Coronavirus, waxay haystaan wax aad uga badan RNA marka loo eego saynisyahannadu mar haddii ay eegayaan Fayris, ama Fayrisyo badan oo sababa cudurada faafa waxay ku tiirsan yihiin noocan ah hiddo-wadaha, inta badana dhammaantood si joogto ah ayey u dhaq-dhaqaaqaan. Taasi waa sababta fayriska hargabku isu beddelaan sannad ilaa sannad.
Sanadkii 2007, Dr. Denison wuxuu ogaaday in coronaviruses-ku leeyihiin nidaam “dib-u-akhrin” awood leh. Haddii cilad ay ku dhacdo koobiyeynta RNA sida coronavirus-ka ay u tarjumeyso, waxay saxdaa khaladaadka. Baadhitaannada shaybaadhka, coronaviruses-ka la beddelay ayaa ahaa mid daciif ah, oo ay ka sarreeyaan kuwa aan beddelin.
Dr. Denison iyo khabiiro kale, ayaa la yaabay haddii ay suurta gal noqon karto in fayrisku ku khiyaaneeyo dawooyin khal-khal galinaya nidaamka dib u eegida, isla markaana xannibay sil-siladda sii kordheysa ee fayriska RNA, taasoo ka dhigaysa in si dhakhso leh loo joojiyo.
Ka hadalka dhibaatadaas saynisyahan Dr. Denison wuxuu bartay in Sayniska Gilead Sciences ay leeyihiin daraasiin dawooyin ah oo samayn kara khiyaanada. “Dhamaan xeryahooda waxaa loo keydiyey hal sabab ama mid kale,” ayuu yidhi Dr. Denison.
Intooda badan waxay ka shaqeeyeen tijaabooyinka shaybaadhka si loo xidho Coronaviruses-ka, wuxuu helay – qaarbaa ka wanaagsan kuwa kale. Mid ka mid ah kuwa ugu wanaagsan wuxuu ahaa GS-5734, oo hadda loo yaqaan dib-u-habeyn. Waxaan jeclahay inaan ugu yeedho Terminator, ”Dr. Denison ayaa yidhi.
Dr. Denison wuxuu ogaaday in kor u kacu ahaa waxa kaliya ee ay raadinayeen: daawo u dhacday nidaamka awoodda badan ee fayriska si loo ilaaliyo RNA, oo ah macluumaadka hidda-socodka ee lsilsiladda borotiinka ee sii kordhiya agabkooda hidaha. Remdesivir, wuxuu sameeyay sil-silado sii kordhaya fayriska RNA oo si dhakhso ah loo joojiyo, isagoo dilaya fayriska.
Remdesivi, wuxuu ku dilay Coronavirus kasta oo caan ah baadhitaanada Dr. Denison. Kadib cilmi baadhayaal ka tirsan Jaamacadda North Carolina, ayaa ogaaday in dawadaasi sidoo kale ay dishay fayriska xayawaanka cudurka qaba.
Taasi kuma koobna oo keliya Coronavirus oo sababa hargabka caadiga ah, laakiin sidoo kale SARS iyo MERS – xitaa Coronavirus oo ku dhaca keliya jiidhka. Laakiin dawaddu waxay ku fashilantay dhowr tijaabo-nololeed oo dhab ah – oo aan ahayn oo keliya ka hor-tagga Jooniska, laakiin sidoo kale ka hor-tagga Ebola ee Afrika. Daawadda ayaa taag -darnaatay, oo aan loo oggolaan in la isticmaalo – ilaa uu dunida kusoo kordhay cuddurka cusub ee Coronavirus ee loo soo gaabiyay COVID-19.
Sida SARS-CoV-2, fayriska sababa Covid-19, wuxuu bilaabay inuu ku biiro masiibo, saynisyahano badani waxay ogaadeen in dib-u-habayntu ay tahay xalka ugu fiican ee gacanta lagu hayo. Waxaa horre looga maray tijaabada xayawaanka iyo tijaabada nabdoonaanta ee Aadamaha.
Markaa dhakhaatiirtu waxay bilaabeen inay bukaannada siiyaan daraasado aan kontorool lahayn iyo xitaa wax ka baxsan daraasadaha dhammaantood. Anecdotes ayaa shiday baahida. Gilead Sciences, wuxuu kafaalo qaaday qaar ka mid ah daraasadahaan wuxuuna dawada siiyay dhakhaatiirta daweynaya boqolaal bukaan oo adeegsi naxariis leh, ka reebitaan sharci ah oo oggolaanaya adeegsiga dawaddaa aan la aqbalin in lagu daaweeyo bukaanka.
Laakiin kuwanna midkoodna muu muujin karayn in dawaddu ay caawinaysay bukaannada. waxayna qaadatay tijaabada Federaalka, taas oo bukaanno badan lasiiyay meelaynta, si ay u muujiyaan in dib-u-habeynta ay u muuqato inay leedahay saameyn yar.
Xitaa saameyn yar oo ka timid dawadda bukaan jiifka Cusbitalku, waxay la yaab ahayd, ayuu yiri Dr. Arnold Monto, oo ku takhasusay cudurrada faafa ee Jaamacadda Michigan. Wuxuu filayay in bukaannada sida kuwa ku jira tijaabada Federaalka aannay ka jawaabi doonin.
“Aad ayey u bukoodeen, bukaannadan oo kale badiyaa kama ay xanuunsanayn jeermiska, ama Bakteeriyada fayriska, laakiin waxay ka cadhoodeen habka is-difaaca. (Taasi waa sababta Tamiflu annay ugu shaqaynin si wanaagsan bukaanka hargabka xun qaba, ayuu raaciyay.) “Ilaah mahadleh, waxaan haysannaa wax shaqeynaya,” ayuu yiri Dr. Monto.
Qofkasta kuma qanacsana in soo kabsashadu ku noolaan doonto wixii loo ballanqaaday. Daraasad lagu sameeyay Shiinaha, oo toddobaadkan lagu daabacay Jaraa’idka ka hadla arrimaha caafimaadka ee caalamiga ah The Lancet Global Health , ayaa lagu ogaaday in dawadaasi aannay wax faa”ido ah u lahayn bukaanada aadka u buka. Khubaro badan ayaa raba inay arkaan xogta Machadka Qaranka ee Xasaasiyadda iyo Cudurada faafa; ilaa iyo hadda, waxaa jiray ku dhawaaqitaanno kusaabsan natiijooyinka saraakiisha maamulka.
“Kama doodi doono waxa laga yaabo inuu Gilead Sciences xukumo mustaqbalka fog, kadib oggolaansho rasmi ah, laakiin dib-u-habaynta uma badna inuu noqdo mid qiime hoose ah, in kasta oo ay ka soo jeedo cilmi baadhis Federaal ahaan lagu maalgeliyey”.
“Gilead Sciences,waxay ogaatay dawaddan waxayna horumarisay dawadan,” Mr. O’Day ayaa yidhi. Waxaan ku lug lahaan jirnay inta badan. Khubarada qaar ayaa ka baqaya in cashuur bixiyeyaasha aannay helin sababta, iyadoo Qiimahoodu muujiyo in dowladda kaliya annay maalgelin maaliyad weyn, laakiin ay ku jirto marxalado khatar ah,”
Fayriska, ayaan ilaa hada loo helin wax dawo ah oo laysku raacsanyahay iyo tallaal toona, waxayna khuburad Caafimaadka iyo dhakhaatiirtu ku talinayaan in uu leeyahay ka hor-tag keliya oo ah inaad raacdo tilmaamaha iyo tallooyinka ay bixinayaan dhakhaatiirtu. sida kala fogaanshaha, ilaalinta iyo taxadirka oo mar walba lagu dedeealo.